Fandikan-dalàn’ny Bianco : Feno ny kapoaka ! -
AccueilRaharaham-pirenenaFandikan-dalàn’ny Bianco : Feno ny kapoaka !
Ny andininy faha-13 ao amin’ny didim-pitondrana laharana 2004-937 tamin’ny fananganana ny Bianco dia manambara fa tsy maintsy manao izao fianianana manaraka izao ny tale jeneralin’ny Bianco: “Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany araka ny lalàna ny andraikitro, hitandro lalandava ny fahamarinana, tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana sy handala ny fahamendrehana takian’ny fahombiazan’ny ady atao amin’ny kolikoly». Voalaza ao amin’ny andininy faha-9 ihany koa fa ny tale jeneraly no tomponandraikitra voalohany eo amin’ny fitantanan-draharaha ao amin’ny Bianco. Feno anefa ny kapoaka ankehitriny…
Navoakan’ny Bianco any amin’ny facebook ny resaka an-tariby nifanaovana tamin’i Claudine Razaimamonjy, talohan’ny nisamborana azy tetsy Mahamasina ny 03 Aprily 2017 lasa teo. Fandikan-dalàna tsotra izao ary fametavetana ny voalazan’ny andininy faha-13 amin’ny didim-pitondrana etsy ambony no nataon’ny Bianco. Tsy vitan’ny hoe namboraka ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana fa lasa misy endrika fijerena tavan’olona ary izay no tena loza amin’izao zava-mitranga izao. Tsy afaka ny hiala-bala na hanilika izao fandikan-dalàna izao amin’ny olona eo ambany fifehezany ny tale jeneralin’ny Bianco araka ny andininy faha-9 notaterina tetsy aloha.
Feno ny kapoaka ankehitriny, tsy azo antoka intsony ny Bianco ary efa mivaona amin’ny andraikitra sy ny iraka nampanaovina azy. Tsy afaka hiantoka ny fiarovana ny tsiambaratelo intsony ny Bianco ary mety ho lasa loza mitatao ho an’ny vavolombelona mihitsy aza. Mazava ho azy fa na ireo izay efa nanao fanambaram-pananana aza mety hahita izany any anaty facebook raha izao no mitohy ka tsy maintsy handraisana fepetra haingana satria manohintohina ny politika napetraky ny filoha Hery Rajaonarimampianina manoloana ny ady amin’ny kolikoly. Loza mitatao ho an’ny firenena ihany koa satria tsy hahatoky intsony ity birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly ity ny vahoaka tahaka ny tsy fahatokisan’ny vahoaka ny Fitsarana noho ny kolikoly ataon’ny mpitsara.